अखिल क्रान्तिकारीको राष्ट्रिय सम्मेलन, कस्ले गर्ला नेतृत्व ? | mulkhabar.com
अखिल क्रान्तिकारीको राष्ट्रिय सम्मेलन, कस्ले गर्ला नेतृत्व ?
August 24, 2017 | 9:46 am 227 Hits
अखिल क्रान्तिकारीको २१ औं राष्ट्रिय सम्मेलन राजधानीमा सुरु भएको छ । राजधानीको कार्की पार्टी प्यालेसमा बुधबार शुरु भएको नेकपा माओवादी केन्द्र निकट विद्यार्थी संगठनको सम्मेलनको उद्घाटन पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डले गरेका हुन् ।
यहि भदौ ११ सम्म जारी रहने सम्मेलनको बन्दसत्र त्रिविको समृति भवनमा हुने क्रान्तिकारीले जनाएको छ । ५ दिनसम्म चल्ले सम्मेलनले नयाँ नेतत्व चयन गर्नेछ । १ हजार भन्दा धेरै सदस्य रहेको आयोजक कमिटीलाई सम्मेलन मार्फत सानो र चुस्त दुरुस्त बनाउने संगठनको लक्ष्य छ ।
संगठनको नेतृत्व सकेसम्म सहमतिमा नभए प्रजातान्त्रीक विधिद्धारा चयन गर्ने यस अघि नै विद्यार्थी संगठनले बताइसकेको छ । सम्मेलनलार्य सवस्थ र मर्यादित बनाउन क्रान्तिकारीले आभार संहिता समेत निर्माण गरेको थियो ।
बन्दसत्रमा सकेसम्म सहमतिमा नेतृत्व चयन गरिने नभए आफूहरु प्रजातान्त्रिक प्रक्रियामार्फत अगाडि वढ्न पनि तयार रहेको आकांक्ष्ी अधिकारीले बताए ।
सो संगठनले निर्वाचनलाई मर्यादित र व्यवस्थित गर्न आचारसंहिता समेत जारी गरेको छ ।
‘राष्ट्रियता र समाजवादी शिक्षाको पक्षमा हाम्रो अभियान,सुदृढ संगठनका लागि एकताको २१ औं राष्ट्रिय सम्मेलन’ भन्ने मुल नाराका साथ हुने सम्मेलनमा २०७६ जना प्रतिनिधि सहभागि भएका छन्। निर्वाचन सम्पन्न गर्न क्रान्तिकारीले संगठनका पुर्व अध्यक्ष रमेश मल्लको संयोजकत्वमा पुर्व अध्यक्षहरु रत्न ढकाल, सन्तोष विष्ट र विष्णु खनाल रहेको निर्वाचन समिति गठन गरेको थियो।
सम्मेलनले ३३ सदस्यीय पदाधिकारीसहित २४३ सदस्यीय नयाँ कार्यसमिति चयन गर्नेछ ।